हिड्दा हिड्दै खुट्टा पाक्यो, पैदल यात्रीलाई पानी समेत दिदैन ! भोक भोकै सुत्न बाध्य (भिडियो सहित) – Ktm Dainik
हिड्दा हिड्दै खुट्टा पाक्यो, पैदल यात्रीलाई पानी समेत दिदैन ! भोक भोकै सुत्न बाध्य (भिडियो सहित) - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
अहिले दिनहुँजसो काठमाडौं र पूर्वदेखि पश्चिमका मानिसहरु हिडेरै आफ्नो गन्तव्यमा जान थालेका छन् । त्यसरी दुई तीन दिन लगाएर वीपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली–खुर्कोट आइपुग्ने मानिसहरुलाई धेरैजसो भोको पेटमा भेटिन्छन् ।
चैत बैशाखको त्यो तातो घाम अनि तातो सडकमा चप्पल घिसार्दै आफ्नो गन्तब्य तिर लम्किनेको अहिले भिड नै हुने गरेको पाइन्छ । हिड्दा हिड्दै थाकेपछी मध्येरातमा सडकमै सुत्ने गरेको पैदल यात्रि हरु बताउछन । हिड्दा हिड्दा आफ्नो खुट्टाहरु सुन्निदै आएपछी लर्खराउदै हिडेको देख्न सकिन्छ ।
बाटोमा केहि सटर खुलेको पाइए पनि उनीहरुले पानि माग्दा समेत नदिने गरेको उनीहरुले गुनासो गरे । काठमाडौँमा खाना नपाएर मर्ने अवस्था देखेपछी आफ्नै गाउ जाने निर्णय गरेको ति मजदुरहरुले बताए ।
सरकारले लक डाउन थप गरेसंगै दिनहु सयौको संख्यामा पैदल हिडेर सिन्धुली–खुर्कोट आइपुग्ने गरेको पाइएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, वैशाख ४ २०७७ २१:१४:४४